Flymya Updates – Telegram
Travel is easy with us.
Visit us at: https://flymya.com
Flymya Travel Update Week 37
Singapore Ministry of Health (MOH) မှထုတ်ပြန်ချက်အရ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့သွားရောက်မည့် ခရီးသည်များအားလုံးသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မထွက်ခွာမီ (၄၈) နာရီအတွင်း စစ်ဆေးထားသော COVID-19 ရောဂါကင်းရှင်းသည့် Polymerase Chain Reaction (PCR) test result ပါရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်ပတ်စ်ပို့ရုံးကို စက်တင််ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်သည်။
အခြားခရီးသွားအချက်အလက်များနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကိုသိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Weekly Travel Update ကို ဤလင့်လ် [https://bit.ly/3ynZr7K] တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
According to the announcement of the Ministry of Health Singapore, all passengers entering Singapore or transiting/ transferring through Singapore are required to takeaCOVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) test within 48 hours of flights to Singapore.
Passport Office in Yangon opens starting from 13th of September.
Click [https://bit.ly/3ynZr7K] to read our Weekly Travel Update for all details and explanations.
157 views 07:50
KBZPay မှာ ဘိုကင်တင်ပြီး ၃,၀၀၀ ကျပ် လျော့စျေးယူကြမယ် 🔔🔔🔔
KBZPay App မှတဆင့် Flymya ရဲ့ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ လေယာဥ်လက်မှတ်နှင့် ဟိုတယ်ဘိုကင်များကို အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစွာဖြင့်ဝယ်ယူပြီး ပြန်အမ်းငွေ ၃,၀၀၀ ကျပ် ရယူနိုင်ပါပြီ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အတွင်း ငွေကျပ် ၅၀,၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် Flymya ဘိုကင်များအတွက် ၃,၀၀၀ ကျပ် အထူးလျော့စျေးရမှာဆိုတော့ အခုပဲ KBZPay App မှာ သွားဝယ်လိုက်တော့နော်။
အသေးစိတ်သိရှိရန် ဤနေရာ [https://bit.ly/3ldHFPQ] ကိုနှိပ်ပါ။
Get cash back 3,000 kyats for Flymya bookings in KBZPay App!
Save time and conveniently buy flight tickets and hotel bookings from Flymya with KBZPay!
Get cash back 3,000 kyats for bookings of 50,000 kyats and above from September 9th to 22nd, 2021.
For more details, click here [https://bit.ly/3ldHFPQ].
172 views 08:03
Flymya Travel Update Week 38
မြန်မာသံရုံး၊ တိုကျို၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် တိုကျို-မြန်မာကယ်ဆယ်ရေးလေယာဥ်ကို အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နှင့် ၁၅ ရက်နေ့တို့တွင် ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
Tokyo-Myanmar relief flight for Myanmar nationals returning to Myanmar from Japan will be operated on 8th and 15th October, according to the statement from Myanmar Embassy in Tokyo.
155 views 10:09
KBZPay မှာ ဘိုကင်တင်ပြီး ၃,၀၀၀ ကျပ် လျော့စျေး ရရှိမည့် Promotion ကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့အထိ ရက်ထက်တိုးသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့အတွင်း ငွေကျပ် ၅၀,၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် Flymya ဘိုကင်များအတွက် ၃,၀၀၀ ကျပ် အထူးလျော့စျေးရမှာဆိုတော့ အခုပဲ KBZPay App မှာ သွားဝယ်လိုက်တော့နော်။
အသေးစိတ်သိရှိရန် ဤနေရာ [[https://bit.ly/3ldHFPQ](https://bit.ly/3ldHFPQ)] ကိုနှိပ်ပါ။
Extended until October 8th!
Get 3,000 kyats cash back for Flymya bookings in KBZPay App!
Save time and conveniently buy flight tickets and hotel bookings from Flymya inside the KBZPay!
For more details, click here [[https://bit.ly/3ldHFPQ](https://bit.ly/3ldHFPQ)].
143 views 03:07
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ Paradise တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chatrium Royal Lake Hotel မှာ အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့ အခြားအထူးအခွင့်အရေးများစွာပါဝင်တဲ့ Staycation Package ကိုအပန်းဖြေတည်းခိုနိုင်ဖို့အတွက် အခုပဲ Flymya နဲ့ ဘိုကင်တင်လိုက်ကြရအောင်နော်!
95 USD ထဲနဲ့ Grand Deluxe Pool View အခန်းကိုအခမဲ့ upgrade လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အပြင် Early Check-In ရော Late Check-out ရောလုပ်နိုင်တဲ့အထူးအခွင့်အရေးနဲ့အတူ Food Menu တွေအပေါ်မှာပါ ၂၀% discount အထိလျော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Staycation Package ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဤလင့်လ် [https://bit.ly/2ZiQCzM] ထဲမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Book with Flymya to relax at the Chatrium Hotel at the lowest price and special offers!
First night for 95 USD only to getaFREE upgrade to Grand Deluxe Pool View, including early check-in (9AM) & late check-out (6PM) offer and up to 20% discount on Food Menu. Extended nights at 89 USD
Click on [https://bit.ly/2ZiQCzM] to check the details of Chatrium Staycation Package or to book.
129 viewsedited 04:43
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်သော ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးစပ်ရွှေသိုက် နေထိုင်ခဲ့သည့် ညောင်ရွှေဟော်နန်း (ခေါ်) ယဥ်ကျေးမှုပြတိုက်သို့ အလည်တခေါက် 🤩
A visit to the the Nyaung Shwe Cultural Museum where Sawbwa Sao Shwe Thaik, the first president of Myanmar lived.
117 views 12:28
Flymya Travel Update Week 39
✅ပူတာအိုသို့သွားမည့် ခရီးသည်များသည် ခရီးသွားမည့်နေ့မတိုင်ခင် ၃၆ နာရီအတွင်း စစ်ထားသော COVID-19 negative result လိုအပ်ပါသည်။
✅Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းသည် ရန်ကုန်-ညောင်ဦးခရီးစဥ်ကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပြန်လည်ပြေးဆွဲသွားမည်။
✅ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်အား Stay-at-Home အစီအစဥ်တွင် အကျုံးဝင်ခြင်းမှပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
အခြားခရီးသွားအချက်အလက်များနှင့် ရှင်းလင်းချက်များသိရှိလိုပါက ဤလင့်လ် [https://bit.ly/3ynZr7K] တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
✅Travellers who visit to Putao must have COVID-19 negative result that has been tested within 36 hours before flight date.
✅Air KBZ will re-operate Yangon-Nyaung U sector (v.v) starting from 1st of October 2021.
✅Ministry of Health removed the Stay-at-Home order for six townships in Sagaing, Bago and Ayeyarwaddy regions.
150 views 07:52
ပုဂံ၊ ညောင်ဦး လေကြောင်းခရီးစဥ်ကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ခရီးသွားများအတွက် သတင်းကောင်းလာပါပြီ 🥳
Air KBZ သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်မှ ညောင်ဦးသို့ (ဟဲဟိုးမှတဆင့်) တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ် သောကြာနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ပြန်လည်ပျံသန်းပြေးဆွဲသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်မှတ်ဝယ်ယူလိုပါက www.flymya.com website မှာ တိုက်ရိုက်ဘိုကင်တင်နိုင်သလို အောက်ပါဖုန်းနံပတ်များကိုလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
We have great news for the travellers who are looking for flights to Bagan/ Nyaung U!
Air KBZ will resume Yangon-Nyaung U flights (via Heho) twiceaweek every Friday and Sunday, effective 1st of October 2021.
☎️ Hot Line: +95 1 3500666 , +959797 97 8888
🌏 Website: www.flymya.com
📨 Email: booking@flymya.co, info@flymya.co
👩🏻‍💻 Inquiries: flymya.com Live Chat, Facebook, Messenger, Telegram
💸 Find us in all popular eWallets: KBZPay App, M-Pitesan App, WavePay App, OnePay App
📱 Download our app: [Android] & [IOS]
103 views 09:09
ကမ်းခြေချစ်သူလေးတွေအတွက် Air KBZ က သံတွဲခရီးစဥ်ကို ရန်ကုန်-စစ်တွေမှတဆင့် တပတ်လျှင် ၂ ကြိမ် ပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးနေပါပြီ။
Hey beach lovers! Air KBZ is operating flights to Thandwe from Yangon (via Sittwe) twiceaweek.
You can book the air tickets directly at www.flymya.com or please contact us via the chatbox or by following phone numbers.
101 views 02:20
✅ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်လေကြောင်းခရီးစဥ်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပျံသန်းဆင်းသက်ခြင်းကို အောက်တိုဘာလကုန်အထိ ယာယီဆက်လက်ကန့်သတ်လိုက်သည်။
✅ လားရှိုး၊ တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ ကလေး၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်နှင့် ကော့သောင်း လေကြောင်းခရီးစဉ်များအားလည်း အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
✅ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ကြမည့် ခရီးသွားများအပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီကန့်သတ်ချက်များအား အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်တိုးမြှင့်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
✅ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ပန်ကြားချက်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ (ဖြေလျှော့ထားသောကိစ္စရပ်များမပါ) အား ၂၀၂၁ ခုနစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရက်တိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်။
97 views 12:15
Elegant Pyi Thar Yar ရဲ့ rooftop bar မှာ ချစ်ရသူတွေနဲ့ အတူ ညနေခင်းရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့လေနဲ့ နေဝင်ဆည်းဆာအလှကိုခံစားရင်း Romantic Vibe လေးကို ဖန်တီးလိုက်ပါ! 👫
အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ Flymya နဲ့ သုံးညဆက်တိုက် ဘိုကင်ပြုလုပ်သူတိုင်းကို Roof Top Bar မှာ ညနေစာ တစ်ကြိမ် FREE သုံးဆောင်ခွင့်လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းကလည်း တစ်ညကို ၄၀,၀၀၀ ကျပ်ကနေစရှိတာကြောင့် အခုပဲ Flymya နဲ့ ဘိုကင်တင်ပြီး သင်ချစ်ရသူတွေနဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေကို ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ!
Staycation Package ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤလင့်လ် [https://bit.ly/3afSMmg] ထဲမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Createaromantic vibe with your loved one by watching the sunset and feeling the fresh breeze at Elegant's Roof Top Bar!
Elegant Pyi Thar Yar is giving one FREE romantic dinner at the rooftop bar for3nights staycation, exclusively for Flymya!
Price starting from only 40000 MMK per night.
Book with us and enjoy quality time with your loved ones!
Click on [https://bit.ly/3afSMmg] to check the details of the Staycation Package or to book.
85 viewsedited 10:51
ဒေါ်လာစျေးတွေမငြိမ်ပေမယ့် Vista Hotel ရဲ့အခန်းစျေးနှုန်းတွေကတော့ တန်မှတန်တဲ့ discount တွေပေးထားပါသေးတယ်နော်!
ဒါ့အပြင်ကိုမှ Vista မှာတည်းခိုသူတိုင်းအတွက် Mr.Tony - love house bar က မည်သည့်အစားအစာကိုမဆို ၁၀% discount နဲ့စားသုံးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်!
Flymya ဧည့်သည်တွေအတွက် သီးသန့်အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်လို့ အခုပဲ Flymya နဲ့ booking တင်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနဲ့ စျေးနှုန်းများကို ဤလင့် [https://bit.ly/3DqY7DN] တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Looking for an affordable staycation in Yangon? Look no further, Hotel Vista hasavery interesting offer for Flymya customers.
You also 10% discount on every menu at Mr. Tony - Love House bar (rooftop).
Please check this link [https://bit.ly/3DqY7DN] out for more booking information and hotel rates.
Contact us for bookings or questions
87 viewsedited 07:30
Flymya App မှာ review ရေးပြီး လျော့စျေးရယူနိုင်တဲ့အကြောင်းသိပြီးပြီလား?
Flymya App ကိုသုံးပြီး မိမိရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို Google Play Store (သို့) App Store မှာ review ရေးပြီး screenshot ကို info@flymya.co ကိုပေးပို့လိုက်တာနဲ့ လေယာဥ်လက်မှတ်၊ ဟိုတယ်ဘိုကင် နဲ့ ကားလက်မှတ်များအတွက် ၁,၀၀၀ ကျပ် လျော့စျေးရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များရှိပါက Messenger (သို့) အောက်ပါဖုန်းနံပတ်များကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
🆕 Join us on Telegram: t.m/flymya
62 views 07:13
ငပလီ (သိုမဟုတ်) ပုဂံရှိဟိုတယ်များကို Flymya နှင့် ဘိုကင်တင်ပြီး လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ကားလက်မှတ်နှင့် ကားအငှါးဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ၅,၀၀၀ ကျပ်လျော့စျေးဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Online မှ Booking တင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Discount voucher ကို သင့်ရဲ့ email ထဲသို အလိုအလျောက်ပိုဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငပလီရှိ hotel များကို book လုပ်ရန် → [https://bit.ly/3oNnXxt]
ပုဂံရှိ hotel များကို book လုပ်ရန် → [https://bit.ly/3iRnqqx]
Bookapreferred hotel in Ngapali (https://bit.ly/3oNnXxt) or Bagan (https://bit.ly/3iRnqqx) and receive 5.000 Ks discount on your flight, bus or car rental.
You automatically receive your discount voucher by email after your hotel booking online.
Flymya Travel Update Week 41
✅ ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများသည် စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ ညောင်ဦး၊ မန္တလေး၊ ဟဲဟိုး၊ မြစ်ကြီးနား၊ သံတွဲ၊ ပူတာအို၊ ခန္တီး၊ လွိုင်ကော်၊ မကွေး၊ နေပြည်တော်၊ အမ်း၊ ဗန်းမော် မြို့များသို့ပြေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။
✅ လားရှိုး၊ တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ ကလေး၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်နှင့် ကော့သောင်း လေကြောင်းခရီးစဉ်များအား အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်သည်။
✅မြန်မာ့အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း(MNA) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း(MAI) သည် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဥ်များအနေဖြင့် ဘန်ကောက်၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ကိုရီးယား နှင့် ဒူဘိုင်းသို့ ပြေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။
48 viewsedited 10:55
KBZPay နှင့် Flymya တို့ရဲ့ အထူးပရိုမိုးရှင်း
ယနေ့ မှ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွင်း ငွေကျပ် ၅၀,၀၀၀ ဖိုးနှင့်အထက် Flymya ဘိုကင်များအတွက် ၃,၀၀၀ ကျပ် အထူးလျော့စျေးရမှာဆိုတော့ အခုပဲ KBZPay App မှာ သွားဝယ်လိုက်တော့နော်။
Hotel Sidney Staycation Package Promo
Staycation နေရင်း Dinner date ရော အခန်းအလှဆင်ပေးတဲ့ service ပါတစ်ခါထဲရှာနေသူတွေအတွက် Hotel Sidney ရဲ့ Stay & Dine Package လေးကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
သက်သာတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့အတူ Package မှာပါဝင်မယ့် အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များကို ဤလင့်လ် [https://bit.ly/30je54l] ထဲမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Hotel Sidney's Stay & Dine Package is perfect for those who are seekingaone-stop dinner date and wonderful room decoration services during the stay.
You can visit this link [https://bit.ly/30je54l] to see other special benefits.
28 views 07:04
ကလောရှိဟိုတယ်များကို ၅,၀၀၀ ကျပ်အထူးလျော့စျေးဖြင့်ဘိုကင်တင်လိုက်ပါ
ကလောမြို့ရှိဟိုတယ်များကို Flymya နှင့် ဘိုကင်တင်ပြီး လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ကားလက်မှတ်နှင့် ကားအငှါးဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ၅,၀၀၀ ကျပ်လျော့စျေးဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Online မှ ဘိုကင်တင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Discount voucher ကို သင့်ရဲ့ email ထဲသို့ အလိုအလျောက်ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလောမြို့ရှိဟိုတယ်များကို ဘိုကင်တင်ရန် → [https://bit.ly/3p124uR]
Bookapreferred hotel in Kalaw [https://bit.ly/3p124uR] and receive 5,000 Ks discount on your flight, bus or car rental.
21 views 12:47